Dambudziko nyowani reApple Watch nemakumi mashanu emakore eRedwood National Park | Ndinobva mac
Pane matambudziko akati wandei ayo Apple yakasimudzira vashandisi veApple Watch mumakore apfuura. Nhasi tinoona imwe nyowani inoenderana nekupemberera kusvitsa makore makumi mashanu kwa Redwood National Park muUnited States. Mune ino kesi, kurovedza muviri kuri zvekare protagonist uye semumatambudziko apfuura akapihwa nevakomana veCupertino, kana tikazadzisa chinangwa ivo vachatipa menduru uye pasuru yezvinamirwa kuti tizvishandise mumapurogiramu ekutumira mameseji uye kunyorera kunoenderana navo .
Dambudziko richaitika mukati mezuva rimwe chete uye akasarudzwa nguva ino anotevera Gunyana 1. Panguva iyoyo, vese vashandisi avo vanoda kutora menduru uye zvinowirirana zvitambi zvichafanirwa kuita rumwe rudzi rwechiitiko chemuviri neiyo App Chitima inoshanda kwemaminetsi makumi mashanu. Izvi ndizvo zvinotitaurirwa naApple:
Saka ikozvino unoziva, kunyangwe iwe uri mumwe wevaya vanoita zvemuviri zuva nezuva, kana avo vasingaite, iwe unogona kuyedza kuzadzikisa dambudziko iri iro Apple rinotimisa iro risina kunyanya kuoma uye iwe uchazowana chimiro ne nzira. Chinofanira kuve chakajeka ndechekuti iyo nguva ye dambudziko iri maawa makumi maviri nemana uye nekudaro chero iwe unozviita munaGunyana 1 kana iwe unorasikirwa nemukana zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dambudziko nyowani reApple Watch nemakumi mashanu emakore eRedwood National Park
Apple inovhura Kyoto chitoro pamberi peMugovera kuvhura
PlugBug Duo, inowedzera nemaviri USB A chiteshi iyo USB C charger yeMac yako